दाङ । देशभर डेंगुका बिरामी फेला परिरहेको समयमा दाङमा पनि डेंगुका बिरामी फेला परेका छन् । यसले दाङ जिल्लालाइ पनि डेंगुको उच्च जोखिमको संकेत गरेको छ । समयमै सावधानी नअपनाए यसले महामारीको रुप लिन सक्ने पनि सर्वत्र त्रास फैलिएको छ । तर डेगु नियन्त्रणका अभियानमा स्थानीय सरकारले भने खास्सै चासो देखाएका देखिदैन । भदौको ४ गतेदेखिहालसम्म दाङका तीन स्थानीय तहमा १५ जना डेंगुका विरामीहरु फेला परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले...
दाङ । घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको सर्रामा बस दुर्घटना भएको छ । घोराहीबाट तुलसीपुर जादै गरेको ग १ ख ४८५९ नम्वरको बस घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ सर्रामा दुर्घटनामा परेको हो । तीब्र गतिमा रहेको बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुदाँ बसमा सवार १८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । दुर्घटनामा तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । दुर्घटनामा घाईतेहरु भएकाहरुको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार...
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकामा फोहारबाट खाना पाकाउने ग्याँस निकालिने भएको छ । ग्याँस उत्पादनका लागि काम समेत भैरहेको छ । आगामी एक बर्षभित्रै फोहोरबाट ग्याँस निकालिने भएको छ । घोराही उप महानगरपालिका–१६ को ल्यानफिल्ड लाईडमा फोहोरबाट ग्याँस निकाल्न थालिएको हो । घोराही उपमहाननगरपालिका, बैकल्पिक उर्जा केन्द्र र नेपाल उर्जा विकास कम्पनी विच त्रिपक्ष सहकार्यमा फोहोरबाट ग्याँस उत्पादन गर्ने कामलाई अघि बढाईएको छ । त्रिपक्षय सम्झौता गएको मंसिर ५ गते सम्झौता...
तुलसीपुर, । दाङको तुलसीपुरमा दोस्रो तरुण कप फुटबल प्रतियोगिता २०७६ हुने भएको छ । तरुण दल तुलसीपुर उप–महानगरपालिका वडा नं ५ को आयोजनामा संचालन गरिन लागेको जिल्ला स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता आउदो असोज १० गतेदेखि सुरु हुुनेछ । स्थानिय स्तरमा खेलकुदको पहुच अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ पिढीलाई फुटबल खेलमा स्थापित गर्ने उदेश्यका साथ आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा जिल्लाका १६ टिमको सहभागिता रहने आयोजक तरुणदल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ५ का सभापति सुनिलबाबु...
दाङ । दाङको बेलझुण्डी रंगशालामा भएको प्रदेश नम्बर ५ मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रदेश स्तरिय लिगमा बाँकेको धम्वोजी फुटबल क्लव लिग च्याम्पियन बनेको छ । बिहीबार बिहान भएको खेलमा दाङको सक्सेस युवा क्वललाई २ का विरुद्ध ३ गोलले पराजित गर्दै बाँकेको धम्वोजी फुटबल क्लव लिगको च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो । मोफसलमा पहिलो पटक सञ्चालन भएको लिगको उपाधि धम्बोजीलाई जिताउन खेलाडी यमबहादुर बुढाथोकी र रवि जिएमले १÷१ गोल गरेका थिए । प्रतिष्प्रधात्मक...
दाङ । दुग्ध जन्य वस्तुको मुल्य वृद्धि गरिएको छ । घोराही क्षेत्रमा दुध दही, घिउ, पनिरलगायतका बस्तुको मुल्य वृद्धि गरिएको छ । डेरी व्यवसायी संघले मुल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । २ वर्षदेखि दुधको मुल्य वृद्धि हुन सकेको थिएन । सबै क्षेत्रमा मुल्य वृद्धि भएको कारण मुल्य बढाइएको डेरी व्यवसायि संघ घोराहीका अध्यक्ष इश्वरी घिमिरेले बताए । संघले दुध प्रतिलिटर ८० रुपैया बनाएको छ । त्यसैगरेर दहि १ सय...
प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीको राजिना माग
दाङ । अस्पतालवाट प्रदान गरिने सेवा कटौतिसँगै प्रतिष्ठानमा महंगो र कार्यरत चिकित्सकहरुमाथि अत्याचार गरेको राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताल राप्ती स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति प्रा.डा. संगीता भण्डारीको राजिनामा माग गरिएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाऔँ अभियानले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उपकुलपति प्रा.डा भण्डारी प्रतिष्ठान चलाउन असफल भएको भन्दै उपकुलपतिलाई राजिनामा गर्न माग गरेको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्राचार रामप्रसाद प्याकुरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २४ घण्टाभित्र राजिनामा दिई प्रतिष्ठानको विकासका लागि मार्ग प्रसस्त...
दाङ । घोराहीको एक होटेलमा एक जना मृत फेला परेका छन । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका– ८ रानीबास निवासी २३ बर्षीय लालु घर्ती आइतबार विहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन । शनिबार राती साथीहरुसँगै घोराही उपमहानगरपालिका–१५ ट्राफिक चोकस्थित शंकर होटेलको कोठा नं. २०६ मा सुतेका घर्ति बिहान मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरिक्षक बिनोदविक्रम शाहले जानकारी दिए । भारतको महाराष्ट्रबाट रोजगारी गरि फर्किदै गरेका घर्तीसहित ६ जना शनिबार...
दाङ । दाङमा खुकुरी प्रहारबाट एक जना घाइते भएका छन । घोराही उपमहनगरपालिका–१५ दाङ भ्याली कलेज नजिकै दुई जना व्यक्तिले कुखुरी प्रहार गर्दा घोराही सोठी ठाउँ बस्ने १८ बर्षीय त्रिशक्ति बर्तौला घाइते भएका छन । बर्तौलालाई सामन्य बिबाद हुदा घोराही उपमहानगरपालिका–१५ ट्राफिकचोक निवासी २३ बर्षीय महेश हमाल र सोठी ठाउँ निवासी २२ बर्षीय राजु चौधरीले खुकुरी प्रहार गरि घाइते बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरिक्षक बिनोदविक्रम शाहले जानकारी...
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१९ च्यानगैरामा टिप्पुर दुर्घटना भएको छ । रोल्पादेखि घोराहीतिर चुनढुङ्गा ल्याएर आउँदै गरेको रा १ ख १२२४ नम्वरको टिप्पर अनियन्त्रित भइै शनिबार दिउँसो साढे बाह्र बजे सडकदेखि दुई सय मिटर तल खसेको थियो । उक्त दुर्घटनामा टिप्परका सहचालक घोराही उपमहानगरपालिका–७ बस्ने करिव २८ बर्षीय रमेश चौधरी घाइते भएका छन । घाइते चौधरीको घोराहीमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरिक्षक बिनोदविक्रम शाहले...